Scribble 🥇 Midira ary mankafiza amin'ny Emulator.online
Scribble . Ny fanatsarana ny voambolana amin'ny fiteny rehetra dia asa mitaky fanoloran-tena. Ahoana raha hanampy anao amin'ity asa sarotra ity ianao, dia afaka miantehitra amin'ny antony mahatonga ny lalao mahafinaritra sy mifaninana? Izy io dia momba ny Scribble, lalao amerikanina, natsangana tamin'ny 1930 ary nanomboka tamin'izay dia nadika tamin'ny fiteny 22.
Scribble: ahoana no filalaovana tsikelikely?
Milalao backgammon an-tserasera maimaim-poana, fotsiny araho ireto torolàlana manaraka ireto :
dingana 1 . Open your preferred browser and go to the game's website emulator.online.
dingana 2 . As soon as you enter the website, the game will already be displayed on the screen. You must choose a name to start playing. If you wish, you can also choose an image. Click " Play" ary afaka manomboka milalao ianao, misafidy ny milalao mifanohitra amin'ny masinina na milalao namana iray na maromaro.
Dingana 3. Here are some useful buttons. You can " Manampy na esory ny feo ", press the " Play " button and start playing, you can " Pause "Ary" Haverina velomina " at any time.
Dingana 4. Mba handresena ny lalao dia tsy maintsy mamorona teny eny amin'ny solaitrabe ianao. Ny litera tsirairay dia misy isa . Izay mahazo isa betsaka amin'ny faran'ny lalao dia handresy.
Dingana 5. Rehefa vita ny lalao iray dia kitiho "Restart" manomboka indray.
Inona no atao hoe Scribble?
Scribble dia lalao filalaovana an-tserasera izay ezahan'ny mpilalao azy (2-4) hanisy isa amin'ny famoronana teny mifandray , mampiasa vato taratasy amin'ny solaitrabe mizara Efatra 225 .
Betsaka ny olona mino fa ireo namorona ny Scribble dia James brunot ary Helen Brunot , fa raha ny tena izy dia tsy hevitr'izy ireo izany ny mpamorona ny Scribble dia i Alfred Butts , mpanao mari-trano avy any Poughkeepsie, ao amin'ny State of New York.
Ny taona dia 1931 , ary toy ny vao tsy an'asa be dia be, i Butts dia manam-potoana betsaka. Nanapa-kevitra ny hanao lalao vaovao izy izay miankina amin'ny vintana ary amin'ny fahaizana.
Alfred Mosher Butts, novakiany ny pejy voalohany amin'ny gazety New York Times mba hikajiana hoe impiry matetika no nomena litera manokana amin'ny teny anglisy (saingy nahena ny fisehoan'ny "S" mba tsy ho mora ny lalao), ary Nahazo sanda ho an'ny tsirairay mifototra amin'ny fahita firy.
Tsy ilaina ny birao satria ny taila dia nalamina araka ny drafitry ny teny lakile. Nomeny anarana ity lalao ity Lexicon .
Ny fanekena patanty dia tsy nekena, ary tsy liana koa ireo mpanamboatra lalao, ka tamin'ny 1938, dia novainy ny lalao tamin'ny fanampiana a 15 x 15 board misy efamira avo lenta ary a fito-kapila tanimanga lectern (endri-javatra mbola mijanona). .
Novany ho anarana koa ilay anarana Criss-Crosswords , fa indray ny Biraon'ny paositra and the game makers didn't want to know anything. After completing a few, he returned to his previous job as an architect.
Tamin'ny 1948, James Brunot , tompon'ny iray amin'ireo lalao vitsivitsy, dia nilaza fa vonona ny hiezaka ny hivarotra azy io amin'ny fomba mahomby. Ho takalon'ny copyright, Nahazo ny zon'ny patanty i Brunot .
Nozaraiko indray ny kianjan'ny loka, notsoriko ny fitsipika ary nanova ny anarana hoe Scribble , izay dia nasiana marika tamin'io taona 1948 io sy tany Great Britain tamin'ny 1953 .
Niasa tao an-trano izy dia nivarotra lalao maherin'ny 2,000 tamin'ny 1949. Tamin'ny 1952 dia nivoaka ny resaka ary nanomboka nihanika ny varotra, sahala amin'ny saika hanipy ilay lamba famaohana i Brunot.
Macy's began supporting the promotional efforts, and because Brunot could not keep up with the increased sales, it licensed production to Selchow & Righter . Ny zon'ny ivelan'i Etazonia, Kanada ary Aostralia dia namidy tamin'i JW Spears, orinasa anglisy. Ny fampiharana britanika voalohany momba ny patanty dia tamin'ny 1954 vao vita.
Ilaina ny kinova samihafa amin'ny fiteny samy hafa satria ny faharetan'ny litera ary na ny litera aza dia mety miovaova (ohatra, ny Espaniola dia manana litera LL sy CH). Lalao maherin'ny 100 tapitrisa no efa namidy tamin'ny fiteny 29. James Brunot dia maty tamin'ny 1984 ary Alfred Butts tamin'ny 1993.
Ny lalàna dia hiankina amin'izay olona lalaovinao ary azo antoka fa tsy hampiharina tanteraka.
Scribble azo lalaovina isa eo anelanelan'ny mpilalao roa ka hatramin'ny efatra .
Misy takelaka toradroa misy efamira 15 eo amin'ny sisiny.
Samy hanana litera fito isaky ny boriboriny ny tsirairay.
Manomboka ny lalao raha raisinao ny taratasy akaiky indrindra A na A.
Ny litera tsirairay dia misy isa miaraka amin'ny sanda mifanaraka aminy.
Ny tabilao dia misy efamira izay mampitombo ny sandan'ny litera na ny teny, raha toa ka mihoatra io sanda io ny litera na ny teny. Ireo soatoavina ireo dia azo avo roa heny na avo telo heny.
Raha toa ny mpilalao afaka mamorona teny amin'ny fampiasana ny litera fito eny an-tànany, dia izy mandeha ho azy 50 isa .
Ao amin'ny Scribble, tsy ny fananganana teny fotsiny izany fa ny paikady dia ny manangona teboka tsara amin'ny litera tsara sy efamira tsara.
Aorian'ny hetsika voalohany dia tsy maintsy mampiasa litera iray farafaharatsiny izay efa eo amin'ny tabilaon'ny lalao ny mpilalao.
Tapitra ny lalao rehefa tapitra ny litera lalao ary samy nanao ny dingana farany ny mpilalao rehetra. Ny isa izay mijanona eo am-pelatanan'ny mpilalao tsirairay dia esorina amin'ny totaliny.
• Raha apetraka mifanila daholo ny sombin-tsoratry ny Scribble vokarina, dia azo atao ny manao tsipika mitohy afaka manodidina ny Tany in-valo.
• Miaramila roa no voafandrika tao anaty tevana iray tany Antarctica tamin'ny 1985. Nilalao Scribble tsy tapaka izy ireo nandritra ny 5 andro, mandra-pamonjy azy ireo.
• Ny statistika dia milaza fa lalao Scribble 30,000 no atomboka isaky ny ora mandalo.
• Ny fiteny farany namokarana Scrabbrle dia Welsh, izay nampidirina tamin'ny 2006.
• Tombanana fa misy lalao kilalao iray tapitrisa farafahakeliny miely manerana an'izao tontolo izao.
• Tamin'ny taona 1993, noraràn'ny Diksionera Scribble ofisialy any Amerika Avaratra ny fitenenan-dratsy rehetra sy ny fanalam-baraka.